Waxaan helnay shahaadada "Certifire" Abriil 2018
War Wanaagsan Muddo 3 sano ah oo aan la shaqeynayay Warrington Center UK, ugu dambayntii waan ku gudubnay imtixaankii iyo imtixaankii, waxaan helnay shahaadada "Certifire" Abriil 2018. Kibir dhammaan shaqaalaha "Gallford"! ...
"GALLFORD" Qosolka hoos u dhig qoyska ayaa leh xubno cusub！
• Gallford waxay ahayd soo saare muddo 20 sano ah, waxaan leenahay waax farsamo oo u gaar ah si aan u qaabeyno wax soo saar, u soo saarno qalabaynta. Oo nafteena soo saar. • Khatimidda hoos u dhigistu waxay leedahay astaamo iyo warbixin tijaabo ah. • Marka laga reebo isticmaalka albaabka alwaaxa alwaaxa, hooskeena hoos u dhig shaabadda sidoo kale de ...
Gacmaha isqabsada si aad ula dagaallanto aafada. 2021, Waxaan ku soconnaa jidka
2020 ， Sannad murugo badan, Sannad qalbigu aad u batay, Sannad aad u badan in la xusuusto. Shiinaha dhexdiisa, had iyo jeer waxaa jira warbixin faafin oo halkan iyo halkaas ah, ； Shiinaha ka baxsan, cudur faafa ayaa ka sii warbixinaya seriou badan si ganacsiga dhoofintu uu u sii adkaado. Si kastaba ha noqotee, "Gallford" p ...